Itoobiya iyo Suudaan oo dagaal qarka u saaran - Awdinle Online
Xiisada u dhaxaysa dalalka Sudan & Itoobiya ayaa sii xumaanaysa maalinba maalinta ka dambeysa, waxaana lagga cabsi qabbaa dagaal labbada dhinac dhexmara.
Afhayenka waasarada arrimaha dibada Itoobiya, Dina Mufti oo maanta hadlay ayaa sheegay in wadda haddal Sudan lala galo uu ka horeeyo innay marka hore ka baxaan dhulka ay qabsadeen. Go’aanka Itoobiya ayuu ku sheegay siddaas, wuxuuna xusay innaan wadda haddalka shurudahaas ka horeeyaan.
Wasirka gaashan dhiga Sudan,Let-General Yaasin Ibraahim oo warbaahinta la hadlay ayaa isaguna sheegay innaysan aqbali doonin shuruudaha Itoobiya dajisay ee hordhaca u ah wadda haddaladasa. Wuxuuna xusay inuu jiro dhul Itoobiya wali haysato oo muddan innay soo celiyaan.
Wararka Sudan lagga helayo ayaa sheegaya innay dagaal u diyaar garoobeen, islamarkaana miisaniyadii loogu talagalay la ansixiyay.Maalin kahorna labbada dal waxay is waydaarsadeen duqaymo cirka ah.
Previous articleShirkado tartan loo gelinayo Keenista iyo Qeybinta Raashiinka Ciidamada
Next articleWasiirka Gaashaandhigga oo booqday xerooyin kuna dhawaaqay…
Guddoomiye Filish oo u digay Shacabka Muqdisho